ဟာ့ဂျခရီးလမ်းညွန် – Kyaw Kyaw Oo's Thoughts, Love and Hope
Posted on December 15, 2009 December 21, 2009 by kyawkyawoo	Posted in ဟာ့ဂျခရီးလမ်းညွန်Tagged မကာရွှေမြို့တော်, ဟာဂျီလောင်း, ဟာ့ဂျခရီးလမ်းညွန်, အရှင်မြတ်ရဲ့ကောင်းချီးကရုဏာတော်, ဒေါက်တာခင်မောင်ထွေး, burmese muslim, burmese muslim minority, Burmese Muslims, guide for Haj, Haj, islam, islam. burmese muslim. myanmar muslim, Myanmar Muslim, myanmar muslim minority
စကားစပ်မိပါတယ်။ သူ့ရဲ့၂၀၀၆ခုနှစ် ဟာ့ဂျအတွေ့အကြုံကို ဝေမျှထားတဲ့
စာအုပ်အပြင်အယ်ဟာ့ဂျမောင်လာနာဟာဖစ်အွတ်စမန်း နဲ့ အယ်ဟာ့ဂျဆရာဒေးဗစ် စွတ်ဗဟန်းတို့
ဒီနေ့ မကာရွှေမြို့တော်ကိုသွားမဲ့…အိုင်တီပညာရှင် ကထိကတယောက်နဲ့ဆုံ
ပါတယ်။ သူက အဖွဲ့နဲ့သွားမှာပါ။ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ပရောဂျက်က ဟာ့ဂျ ခရီးကို
သွားမဲ့ဟာဂျီလောင်းများအတွက် ကွန်ပြူတာနဲ့ Virtual Simulator လို့ခေါ်တဲ့
ရုပ်မြင်သံကြား နဲ့ဂိုက် လုပ်ပေးမဲ့ပရိုဂရမ်အတွက်ပါတဲ့။
ဒီပရိုဂရမ်ကို ဘာသာစကားပေါင်းစုံနားလည်လွယ်အောင်စီစဉ်နေတဲ့အကြောင်း ပြောပြသွားပါတယ်။
ဟာ့ဂျခရီးစဉ်ကိုပိုမိုလွယ်ကူအောင်ဟာ့ဂျခရီးလမ်းညွန်ပြုလုပ်ပေးနေသူများးအားလုံးအပေါ်သို့ Allahအရှင်မြတ်ရဲ့ကောင်းချီးကရုဏာတော်များကျရောက်ပါစေလို့ဆုဒိုအာပြု ပါတယ်။